क्षेत्री समाज बेलायतको पाँचौं अधिवेशन सम्पन्न २१ सदस्यीय कार्यसमिति निर्विरोध चयन । – Chettrisamajuk
क्षेत्री समाज बेलायतको पाँचौं अधिवेशन सम्पन्न २१ सदस्यीय कार्यसमिति निर्विरोध चयन ।
क्षेत्री समाज बेलायतको पाँचौं अधिवेशन सम्पन्न २१ सदस्यीय कार्यसमिति निर्विरोध चयन
लन्डन, यही अप्रिल २ तारिख शनिवारका दिन क्षेत्री समाज बेलायतको पाँचौं अधिवेशन भव्य रुपमा सम्पन्न भएकोछ । बेलायतको रेडिंगमा भएको उक्त अधिवेशनको उद्घाटन समाजका सम्रक्षक श्री ध्रुव के.सी. र समाजकै अध्यक्ष्य श्री प्रेम खड्काद्वारा सयुक्त रुपमा पानसमा बत्ति बालेर गरिएको थियो । संस्थाका अध्यक्ष प्रेम बहादुर खड्काको अध्यक्ष्यतामा बसेको सो अधिवेशनले समाजका पूर्व उपाध्याक्ष्य रि. क्याप्टेन धन बहादुर कुँवरलाई निर्बिरोध रुपमा संस्थाको अध्यक्ष्यमा चयन गरेको छ भने कुँवरको नेतृत्वमा आगामी दुइ वर्षको लागि २१ सदस्यीय कार्यसमितिको पनि चयन गरेकोछ । जसअनुरुप उपाध्यक्ष्यमा रि.क्याप्टेन टेक बहादुर जी.सी., महासचिव राजन कुमार क्षेत्री, कोषाध्यक्ष्यमा गोबिन्द महत, सह-सचिव कुमार के.सी., सह-कोषाध्यक्ष्य सुश्री सेविका जी.सी., महिला संयोजक श्रद्दा थापा, जनसम्पर्क सचिव दिल बहादुर जी.सी.,सांस्कृतिक सचिव श्रीमती सुनिता गौतम थापा संचार संयोजक नरेन्द्र बस्नेत तथा कार्यकारी सदस्यहरुमा ललित कुमार न्यौपाने, कृष्ण थापा, श्रीमती माया के.सी., चन्द्र कार्की, उत्तम खत्री,महेन्द्र के.सी., मनिष खड्का, पदम विर्ख रावल, श्रीमती प्रतिमा के.सी., इन्द्र क्षेत्री र टोप बहादुर रावत निर्विरोध चयन हुनुभएकोछ ।
कार्यक्रममा शुभकामना तथा स्वागत मन्तव्य दिंदै समाजलाई अघि बढाउन र समाजको हक हितको लागि सबैले मिलेर केही गरौँ भन्ने भावनाले अगाडी बढ्नु पर्ने सबैको राय रहेको थियो । समाजमा जेजति कार्यहरु भइरहेकाछन् त्यसलाई सबैले मिलेर अझ अगाडि बढाउने प्रयास गर्नुपर्ने र प्रतिस्पर्धाको भावनाले हैन सेवा र सहयोगको भावनाले अगाडि बढ्नुपर्ने जस्ता अवधारण राखिएका थिए । मन्तव्य प्रस्तुत गर्नेहरुमा समाजका अध्यक्ष्य श्री प्रेम बहादुर खड्का, पर्मुख सम्रक्षक श्री ध्रुव के.सी., मेजर रिटायर्ड रुद्रबहादुर खड्का, सम्रक्षक श्री कृष्ण अधिकारी, पूर्व अध्यक्ष श्री भीम बानिया, समाजका सल्हाकार डाक्टर रामकुमार अधिकारी र आजिबन सदस्य श्री रामशरण सिंखडा हुनुहुन्थ्यो। सो कार्यक्रमको संचालन समाजका महासचिव क्याप्टेन रिटायर्ड टेक बहादुर जी.सी.ले गर्नुभएको थियो । उहाँले समाजका सम्पूर्ण दुईबर्से विवरणहरु प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । समाजलाई अझ बढी गतिशील र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने बाचासहित पुरानो कार्यसमितिले नयाँ कार्यसमितिलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।
बेलायतवासी क्षेत्रीबन्धुहरुलाई आईपर्ने विभिन्न किसिमका आपतबिपत र हक हितको लागि एकापसमा सहयोगको भावनाले क्षेत्री समाज बेलायातको सन् २००७ मा स्थापना गरिएको हो । यसका अतिरिक्त नेपालमा हुने दैवीप्रकोप तथा अन्य कुनै पनि समस्यामा समाजले सक्दो सहयोग गर्दै आइरहेकोछ । गत वर्ष नेपालमा गएको विनासकारी भूकम्पमा पनि नेपाली दूतावासमार्फत प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रकम जम्मा गरेको थियो भने त्यसभन्दा अगाडि बाढी पीडितहरुलाई पनि सक्दो सहयोग पुर्याएको थियो । त्यस्तैगरी भूकम्प पीडित पत्रकारहरुको सहयोगस्वरूप नेपाल पत्रकार महासंघ बेलायत शाखालाई छुट्टै रकम हस्तान्तरण गरेको थियो । आफू तथा मात्रिभूमीलाइ समेत आपतबिपतमा सहयोग गर्दै आएको यस समाजलाई अघि बढाउन सम्पूर्ण बेलायतवासी क्षेत्रीबन्धुहरुले हातेमालो गरी अघि बढ्न आवश्यक छ। जातीय प्रतिस्पर्धाको लागि नभई सामाजिक परम्परा र संस्कृतिक उत्थानको लागि स्थापित यस समाजले पछिल्ला पुस्ताहरुलाई नेपाली परम्परा र संस्कृतिको बारेमा जानकारी गराउँदै आएकोछ। सामाजिक हित र पारस्परिक सम्बन्धको लागि बेलायतका विभिन्न क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आउने सबैले एकता जनाउनुपर्ने समाजको धारणा रहँदै आएकोछ। समाजको आवश्यकता महशुस नगर्ने धेरैजसोलाई यसको महत्वको बारेमा जानकारी गराएर एकतवद्द हुनको लागि सबैको सहयोगको खाँचो भएको ठहर समाजले बारम्बार औंल्याउदै आएकोछ। भावी सन्ततिहरुलाई पश्चिमा संस्कृतिको प्रभावमापरि नेपाली संस्कृति र परम्पराबाट बन्चित हुन नदिनको लागि समयमै सबैले सचेत भएर उनीहरुलाई व्यबहारिक ज्ञान दिलाउनु हामि सबैको कर्तव्य हुने भएकोले पनि सामाजिक जमघट र एकताको आवश्यकता पर्दछ। तसर्थ सबैले आ-आफ्नो क्षेत्रबाट सामाजिक एकीकरणको लागि पहल गर्नु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। साथै सामाज हाम्रो हो र हामीलाई समाज चाहिन्छ भन्ने सबैको मानसपटलमा हुनु पनि अनिवार्य छ ।
क्षेत्री समाज बेलायत I
Next क्षेत्री समाज बेलायतको पाँचौं कार्यसमितिको पहिलो बैठक सम्पन्न
Previous सदस्यता नविकरण सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना !!!‏